Guddiga doorashooyinka ee IEBC oo soo jeediyay in la baaro shahaadooyinka barasaabka Garissa – The Voice of Northeastern Kenya
Guddiga doorashooyinka ee IEBC oo soo jeediyay in la baaro shahaadooyinka barasaabka Garissa
Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudada ee IEBC ayaa war saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay inuu guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ee EACC iyo waaxda dacwad oogidda ee dalka ugu baaqayo inay baaritaano ku sameyaan shahaadooyinka waxbarasho ee hoggaamiyaha dowlad degaanka Garissa Cali Bunow Qorane.
Waaxyaha dambi barista ayaa laga doonayaan inay dabagal ku sameyaan dokumeentiyada barasaabka si loo xaqiijiyo inay kuwo sax ah yihiin.
Arrintan ayaa timid markii mid ka mid ah qareenada dalka oo lagu magacaabo Charles Kanjama uu su’aal geliyay shahaadooyinkaasi.
Mr. Kanjama ayaa matalaya qoyska wasiirkii hore ee maaliyadda iyo qorshaynta dhaqaalaha ee ismaamulka Garissa, Idiris Aadan Mukhtar oo maalmo ka hor lagu toogtay xaafadda Kileleshwa ee magaaladatani Nairobi.
Aabaha dhalay Idiris ayaa sheegay inay rumeysanyihiin in wiilkiisa la dhaawacay maadaama uu dabagal ku sameynayay fadeexad uu ku tilmaamay musuqmaasuqa oo ku aaddan warqadaha waxbarasho ee guddoomiyaha Garissa.
Hasa ahaate Barasaabka Garissa, Cali Bunow Qorane oo iska fogeeyay inuu ku lug leeyahay toogashadii loo geystay wasiirkii hore ee maaliyadda ee ismaamulkaasi ayaa dhanka kale sheegay inaysan jirin shahaado heerka loo yaqaano Masters ah oo uu u gudbiyay guddiga doorashooyinka ee IEBC.
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee dalka Mr. Wafula Chebukati, ayaa guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ee EACC, waaxda dacwad oogidda iyo waaxda dambi baarista ee dalka ka codsaday inay baaritaano qota dheer ku sameyaan eedeymaha arrimahaasi ka dhashay iyo xiriirka ka dhexeya.
Mr .Chebukati ayaa sido kale Mr. Kanjama iyo cid waliba oo haysa macluumaad ku saabsan in isbedel ama farsamayn lagu sameeyay shahaadooyinka barasaabka ugu baaqay inay laamaha baaritaanada qaabilsan ku wargeliso.
Dhanka kale Mr. Chebukati ayaa ka digay in la jeediyo fariimo ama hadalo aanan loo meel dayin oo saameyn ku yeelan karo baaritaanada iyo geedisocodka cadaaladda.
Guddiga IEBC ayaa sheegay in barasaabka Garissa uu u ogolaaday inuu doorashada ka qeyb qaato maadaama uu soo gudbiyay dokumeentiyadii looga baahnaa.
Waxaa qoraalka IEBC oo uu saxiixay guddoomiyaha, Mr. Wafula Chebukati qeyb ka ah in guddiga EACC uu codsaday in lagu wareejiyo dokumeentiyada Cali Bunow uu u geeyay guddiga doorashooyinka taasina lagu wareejiyay.
← RASMI: Barca oo ku dhawaaqday liiska xidigaha ay kaga qeyb galaysa Champions League
Meydka gabadh la afduubtay oo laga helay Homa Bay →